Na-enweghị Ngwaọrụ Kwesịrị Ekwesị ... | Martech Zone
Monday, May 9, 2011 Tọzdee, Ọktoba 27, 2011 Douglas Karr
Abalị abali mụ na enyi m Adam Small, CEO nke Agent Sauce - a ikpo okwu ahia ala. Emechaa, anyị kpebiri ịga lee Thor na IMAX 3D. Mgbe ihe nkiri ndị ọzọ kwụsịrị, ndị na-ege ntị juru na biri… rue mgbe anyị nụrụ mkpu na-atụ ụjọ n'ụlọ ihe nkiri ahụ:
"SITE! ”, Nwoke tiri mkpu.
Theaterlọ ihe nkiri ahụ gbachiri nkịtị… na nkeji ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị, mkpu ọzọ:
"OLỌ AKWOKWỌ… AKW !!!KWỌ !!!“… Ugbu a iwe na-ada ike.
Naanị otu onye na-ege ntị gbatara ọsọ enyemaka:
"Dude, tinye ugogbe anya."
Ndị na-ege ntị wee tie mkpu n'ọchị. Na-enweghị iko 3D (ngwa ọrụ ahụ), ihe nkiri ahụ abụghị ihe elere anya. Nke a bụ ihe mere metrik na nchịkọta bụ akụkụ dị mkpa nke mkpọsa ọ bụla. Ezutewo m ọtụtụ ndị ahịa ndị -eche ha nwere nghọta doro anya banyere usoro ahia ha, itinye ego ha site na usoro ọ bụla, yana akụ dị mkpa iji mezuo.
Ma, e nweghị ngwá ọrụ iji tụọ ha n'ụzọ zuru ezu, ihe ga-esi na ya pụta pụrụ ịbụ ihe na-enye ọkụ karịa otú ha chere! Tupu i mezuo mkpọsa gị ọzọ, gbaa mbọ hụ na ị nwere enyo anya gị!
Mee 10, 2011 na 11: 00 AM
Doug - enweghị m ike icheta ịmara onye ọ bụla nke ọ bụla nwere mkparịta ụka na-adọrọ mmasị na ndụ karịa gị. Akwa post!
Mee 10, 2011 na 12: 15 PM
Chere, nke ahụ mere n'ezie?
Mee 10, 2011 na 1: 36 PM
Ee, ọ mere n'ezie! 🙂